गर्मीमा सन्स्क्रिन भन्दा कम छैन टमाटरको फेसप्याक, यस्ता छन प्रयोग गर्ने तरिका !
खानामा टमाटरको प्रयोग गर्नाले स्वास्थ्यमा पर्न जाने अनुकुल प्रभावका बारेमा त सबै जनालाई थाहा नै छ। डाक्टरहरुको भनाई अनुसार टमाटरको सेवन गर्नाले अनुहारमा चमक आउनका साथै सुन्दर र सफा राख्न मदत गर्छ। एक अध्ययनले पनि के देखाएको छ भने टमाटरमा पाइने लाईकोपिन तत्वले घामबाट आउने अनावश्यक विकिरणहरुबाट छालालाई बचाई राख्न मदत गर्छ। त्यसै जसले गर्दा टमाटरको रंग रातो हुन्छ।
सामान्यतया पाकेको रातो टमाटरमा यस प्रकारको मुख्य तत्व पाइने गर्छ। टमाटरको सेवन नियमित रुपमा गर्नाले सुर्यका हानिकारक किरणहरुबाट त्वचालाई सुरक्षित बनाई राख्छ। टमाटरको फेसप्याक लगाउनाले अनुहारलाई घामबाट बचाउनुका साथै यसमा भएको ल्‍यूटिनले अनुहारलाई हाईड्रेड बनाईराख्नुका साथै छालालाई मुलायम बनाउनमा मदत गर्छ।
कसरी गर्ने त यसको प्रयोग ?
टमाटर र निबुवा
अनुहारमा आएका हर समस्याको समाधानको लागि टमाटरको भित्रको गुदी र निबुवाको रस मिसाई लगाउने। सुके पछि चिसो पानीले धुने यहि प्रक्रिया हरेक दिन गर्नाले अनुहारमा देखिएका हरेक दाग धब्बा हट्नुका साथै छाला नरम र मुलायम समेत हुन्छ।
टमाटर , निबुवा र दहीको प्रयोग
टमाटर , दहि र निबुवाको रसले छालालाई प्राकृतिक रुपमा नै सफा गर्ने काम गर्छ। यसले अनुहारमा भएको चिल्लोपनलाई हटाउनका साथै छालाको भित्रसम्म पुगी अनुहारमा प्राकृतिक निखार ल्याउनमा मदत गर्छ। निबुवाले ब्लिच र एन्टी ब्याक्टेरियल तत्वको रुपमा काम गर्छ भने दहीले त्वचालाई नरमता प्रदान गर्दछ जसले गर्दा छालामा हुने रूखोपनबाट बच्न सकिन्छ।
टमाटर र चिनी
टमाटरलाई काटी त्यसको एक टुक्रामा चिनी हालेर स्क्रब गरेको तरिकाले अनुहारमा लगाउनाले अनुहारमा आएकाअनावश्यक दाग , धब्बा र पिम्पल्सहरुबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। यसका साथै पखालेको करिब १० मिनेट पश्चात टमाटरमा मह मिसाई प्रयोग गर्नाले पनि बिशेष फाइदा पुग्ने देखिन्छ।
टमाटर, मह र बेसन
अनुहारमा चमकता ल्याउनका लागि टमाटरको प्याक एकदम लाभदायक हुने गर्छ। टमाटर , मह , बेसार , दाल , पुदिनाको पातको पेस्ट बनाई प्रयोग गर्नाले पनि अनुहारमा बिशेष फाइदा पुग्ने देखिन्छ।
प्रकाशित : आइतबार, जेठ २६, २०७६०८:२८